『 Siyakuhalalisela ‧ 』 Seaview Building King Pool Big Balcony Panoramic Seaview Five-star Property Management Near Silver Beach Overcountry Port Wanda - I-Airbnb
『 Siyakuhalalisela ‧ 』 Seaview Building King Pool Big Balcony Panoramic Seaview Five-star Property Management Near Silver Beach Overcountry Port Wanda
377 okushiwo abanye
Beihai, Guangxi, i-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-恭喜民宿
U-恭喜民宿 Ungumbungazi ovelele
"Halala Ikhaya" linolunye uhlu, chofoza ku-avatar ukuze uphequlule, zonke izinhlu zisesakhiweni esisodwa!
- Isithombe sangempela, sokuqinisekisa ukuthi igumbi olibhukhile lifana ncamashi nokuhlala kwangempela
- On the 28 kanye 24 iphansi, indlu yathengwa salungiswa ndawonye, futhi ifenisha kuyafana Umehluko wukuthi phansi 28 has a udonga oluhlaza, futhi phansi 24 has a udonga blue Asazi ukwamukela okukhethayo.. phansi, sizohlela ngokuya ngesimo segumbi sosuku)
- Amakamelo okulala amabili negumbi lokuhlala elilodwa, igumbi lokulala elikhulu nelesibili ngalinye linombhede ophindwe kabili wamamitha angu-1.8X2
- Igumbi lokulala elikhulu linokubukwa kolwandle, ikamelo lesibili linokubukwa komgwaqo, womabili amakamelo anamafasitela e-bay
- Kulula kakhulu ukuya eSilver Beach, Overseas Chinese Port, kanye naseFerry Terminal.
- Eduze kuneMakethe Yemifino yase-Hangzhou Road, i-Benji Vegetable Market, i-Qiaogang Seafood Wholesale Market, i-Wanda Supermarket, futhi impilo ilula kakhulu.
- Kukhona indawo eqashisayo yemoto kagesi esitolo esingaphansi, 4-5 yuan/ihora. Kukhona namabhayisikili abiwe mahhala emnyango womphakathi, okulula kakhulu ukuhamba.
- Indawo yokupaka yamahhala yezimoto ezizishayelayo
Le ndawo yokuhlala itholakala endaweni eseduze ne-Yintan, enokubukwa okungavimbekile kwe-Yintan, ukubukwa kolwandle okungama-degree angu-270, amafasitela abanzi futhi anethezekile, asuka phansi kuya ophahleni egumbini lokuphumula, kanye novulandi omkhulu.
4.99 · 377 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-377
1. Kuqhele ngamakhilomitha angu-2.4 ukusuka e-Beihai Silver Beach, futhi kuthatha imizuzu eyi-10 ngemoto. Hamba ngebhayisikili imizuzu engu-15.
2. Kungamakhilomitha angu-1.2 kanye nemizuzu engu-8 ukushayela usuka ku-Qiaogang Customs Street. Imizuzu engu-15 ukuhamba. Hamba ngebhayisikili imizuzu engu-10.
3. Kuqhele ngamakhilomitha angu-8.5 ukusuka e-Beihai Old Street, uhambo lwemizuzu engama-25, kanti imali ye-Didi icishe ibe ngu-RMB 25.
4. Ibanga eliya eFasiteleni Lolwandle lingamakhilomitha angu-3.1, kanti imali ye-Didi icishe ibe ngamayuan ayi-10.
5. Ibanga lokuya emhlabeni ongaphansi kwamanzi lingamakhilomitha angu-7.9, kanti imali ye-Didi ingu-25 yuan.
6. Ibanga lokuya e-Guantouling lingamakhilomitha angu-11.7, kanti imali ye-Didi icishe ibe ngamayuan angama-30.
7. Ibanga lokuya ehlathini lomhlume lingamakhilomitha angu-9.6, kanti imali ye-Didi ilinganiselwa ku-26 yuan.
U恭喜民宿 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Beihai namaphethelo